01 Faa'iidada Brand
In ka badan 700 oo bakhaarro franchised ah oo ku yaal Shiinaha waxay ku yaalliin goobihii hore ee wax-iibsiga. Sumcadda iyo daacadnimada macaamilka ayaa sii kordheysa maalinba maalinta ka dambeysa, qiimeynta summadduna waxay gaarsiisan tahay 5 bilyan oo RMB.
02 Faa'iidada Badeecada
Kooxda naqshadeeyaha caalamiga ah iyo kooxda wax iibsiga ee khibrada leh, la soco isbedelka moodada. In ka badan 5ooo+ alaabada moodada, 3oo+ badeecooyin cusub oo suuqa yaal bil kasta.
03 Faa'iidada Silsiladda Sahayda
Iyada oo leh xasilloonida sahayda, soo iibsi tayo leh oo la xakamayn karo, 1000+ warshado tayo sare leh ayaa si toos ah u wada shaqeeya, hoos u dhiga isku xirka dhexe si loo yareeyo kharashaadka, loo ilaaliyo danaha shuraakada, loona gaaro guul-wadaag!
04 Faa'iidada Dugsiga Ganacsiga
Iyada oo leh 12 tababar ku -talabixin kooxeed iyo macallimiin khibrad u leh warshadaha si loo baro hawlgalka dukaanka. Habaynta nidaamka iibka iyo tababarka dukaanka.
05 Faa'iidada Adeegga
In ka badan toban sano oo waayo -aragnimo ah dukaamada waaxda iyo warshadaha silsiladda, 700+ dukaamada tafaariiqda jirka ah, iyo adeegga macmiilka ee xirfadda leh. Kooxda kormeerka bilada dahabka, nidaamka adeegga sayniska iyo adag.
In ka badan labaatan sano oo horumar ah, nidaamka silsiladda sahayda ee Mr. huolang ayaa astaan ​​u ah bakhaarka waaxda iyo warshadaha tafaariiqda.
isaga oo ka jawaabaya istaraatiijiyadda qaranka "hal suun hal waddo," Mr. huolang wuxuu ballaariyay suuqyada caalamiga ah iyo ballaarinta caalamiga ah isagoo leh "qaabkii wax soo saarka dukaanka oo dhan." waa amis in la abuuro cutub cusub bakhaarka waaxda iyo warshadaha tafaariiqda oo la gaaro guul-wada!
Saamayn summad xoog leh
In ka badan 700 oo bakhaarro franchised ah oo ku yaal Shiinaha waxay ku yaalliin goobihii hore ee wax-iibsiga. La aasaasay muuqaal summad leh oo “raqiis ah, ku habboonaansho, tayo sare leh, iyo badeecado badan” macaamiisha. Sumcadda iyo daacadnimada macaamilka ayaa sii kordhaysa maalinba maalinta ka dambaysa.
Horumarinta suuqgeynta saxda ah
Mr. huolang wuxuu si buuxda u taageersan yahay kor u qaadista suuqyada waaweyn ee franchise, oo ay ku jiraan kor u qaadista sawirka, qorsheynta furitaanka, qorshayaasha dallacsiinta, iyo naqshadaynta dukaanka.
Faa'iidada badeecada tartanka
Mr. huolang wuxuu sameeyay isbahaysi istiraatiiji ah oo ka badan 5,000 oo warshadood si loo hubiyo qiimaha iyo u-tartammada tayada badeecadaha leh soo iibsiga baaxadda leh. In ka badan 35,000 oo alaab ah ayaa lagu keenay qiimahii hore ee warshadda.
Meesha saxda ah ee suuqa
Sida laga soo xigtay suuqa, heerka isticmaalka dadka, caadooyinka wax iibsiga, iyo kooxaha macmiilka ee muhiimka ah, alaabada Mr. huolang waxay la jaanqaadayaan baahida suuqa si loo habeeyo badeecadaha loona dejiyo qiimaha.
Adeeg fiican oo iibka kadib ah
Ka dib in ka badan 20 sano oo horumar ah, Mr. huolang wuxuu aasaasay nidaam adeeg ka hor iibinta iyo iibinta kadib, badeecado kala duwan oo leh adeeg gadaal-iibis aad u fiican, kaas oo lagu hubinayo in macmiilku leeyahay waayo-aragnimo wax-iibsi oo wanaagsan.
Summad gaar ah
Mr. huolang wuxuu leeyahay warshaddiisa, summaddiisa, iyo in ka badan 700 oo dukaan oo franchised ah oo ku yaal Shiinaha. Waxay diiradda saareysaa soo -saarka qalabka, daruuriga maalinlaha ah, saldhigyada, iyo dahabka, iwm.
Kooxda maaraynta ee heer sare ah
Kooxda maamulka ayaa go'aamisay nolosha horumarka shirkadda. In ka badan 20 sano oo horumar ah, Mr. huolang wuxuu aasaasay koox hufan oo xirfad leh oo ay ka mid yihiin Waaxda Guryaha, Waaxda Iibka, Waaxda Suuqgeynta, Waaxda Badeecadda, Waaxda Baakadaha, Waaxda Warfaafinta, Waaxda Maaliyadda, Waaxda Iibinta, Waaxda Saadka iyo Waaxda Hawlgalka iyo sidaas daaran
Falsafadda ganacsiga qaangaarka ah
In ka badan toban sano oo horumar ah, Mr. Huolang wuxuu sameeyay falsafad ganacsi oo dhammaystiran; shirkaddu waxay la jaanqaadaysaa suuqa iyo adduunka.